FBC - HP dhagaawwan kompiwtaraa kuma 50 ol addunyaa mara irraa sassaabamanii akka deebi’an gaafate
HP dhagaawwan kompiwtaraa kuma 50 ol addunyaa mara irraa sassaabamanii akka deebi’an gaafate
Finfinnee, Amajjii 3, 2010 (FBC) Oomishaan kompiwtaraa HP baatiriiwwan kompiwtaraa kuma 50 ol gurgurtaaf dhihaatan akka deebi’an waamicha dhiheesseera.
Kaampaanichi kana kan beeksise maamiltoonni saddeet dhagaawwan (batteries) kunniin humnaan ol hoo’aniiru, darbees baqaniiru kan jedhuun gabaasuusaanii boodadha.
Gaaffiin barreeffan dhihaate HP kun “ qulqullinaa fi nageenyi meeshaalee HP xiyyeeffannoo keenya duraati. Dhagaan dhiheessitoota keenyaan “notebook computers fi mobile workstations”f dhihaate rakkoo akka qabu dhiheenya bira geenyeerra” jedha.
Kaampaanichi dhimma kana irratti fedhiin akka deebi’uuf gaafachuu fi bakka buusuu dabalatee tarkaanfii hatatamaa akka fudhatu ibseera.
Baatiriiwwan tarii miidhamuu hin oolan jedhaman kunniin HP ProBook (64x G2 and G3, 65x G2 and G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 notebooks, and HP ZBook (17 G3, 17 G4, Studio G3) Mobile Workstations Mudde 2015 fi Mudde 2017 giidduutti guutummaa addunyaatti gurguramanidha.
Kaampaanichi maamiltoonni isaa Laaptooppiin isaanii miidhameera yoo ta’e Weebsaayitii HP www.HP.com/go/batteryprogram2018 ilaalanii mirkaneessuu danda’u.
Maamiltoonni baatiriiwwan miidhaman battalatti akka ittin hojjachuu dhaaban akeekameera. Kanaafi kaampaanichi ‘BIOS update’ baatiriiwwan kanniin dhaabu fi hanga bakka buufamanitti lammata akka humna hin-guutamne dhorku dhiheesseera.
HPn baatiriiwwan kompiwtaroota isaa akka deebi’aniif wayita gaafatu kun jalqaba miti. Yeroo dhihoo asitti hoo’ina dhagaawwan (batteries) waliin wal qabatee Amajjii 2017 fi Waxabajjii 2016 akka deebi’an gaafatee ture.
Oduuwwan Biroo « Aappil eeggannoo icciitii Aayfoon, Aaypaadii fi Maak ifoomse	Feesbuukin odeeffannoowwan maxxanfaman hir’isuufi »